Barcelona oo wali ka quusan la’a saxiixa Clement Lenglet, inkastoo ay heshiiska u kordhisay Samuel Umtiti – Gool FM
Barcelona oo wali ka quusan la’a saxiixa Clement Lenglet, inkastoo ay heshiiska u kordhisay Samuel Umtiti
Dajiye June 3, 2018
(Barcelona) 03 Juunyo 2018. Wargeyska Isbaanishka ah ee “Sport” ayaa sheegay in Barcelona ay isku diyaarineyso inay la saxiixato daafaca reer France iyo kooxda Sevilla Clement Lenglet inta lagu jiro xilliga xagaaga.
Qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha Barcelona ayaa rajeynaya saxiixa difaaca kooxda Sevilla Clement Lenglet si uu qeyb kaga noqdo qorshaha Ernesto Valverde ee xili ciyaareedkan cussub.
Si kastaba kooxda reer Catalonia ayaa diyaar u ah in ay la wareegto saxiixa difaaca kooxda Sevilla Clement Lenglet in kastoo ay heshiiska u kor dhiyeen Samuel Umtiti.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in Clement Lenglet la filayo in Barcelona ay dhameystirto saxiixiisa kadib marka uu soo idlaado koobka aduunka 2018 ka furmi doono 14-ka bishan dalka Russia, Barcelona ayaana dooneysa in ay si fiican u daawato bandhiga xidiga.
Juventus oo qeyb kasoo noqotay loolanka loogu jiro saxiixa Robert Lewandowski